Ny Atetika Diet Basics | Nutri Diet
Ity sakafo ity dia nomena anarana Atkins dokotera, izay manazava fa ny vatantsika dia mora mandoro gliosida noho ny proteinina, noho izany, manova ny gliosida ho lasa angovo ary mitahiry proteinina amin'ny endrika tavy.
Izany dia mahatonga ny vatantsika handray karibômatika foana hamokarana angovo, na izany aza, raha manapa-kevitra ny tsy handray azy ireo isika ary hihinana proteinina madio ary saika tsy misy gliosida, ny hany angovo ho hitanao dia ny fivarotana matavy.
Amin'ity sakafo ity dia very lanja be ianao raha manaraka azy amin'ny taratasy fa tsy mandray licence be loatra. Izy io dia mamela ny fihinanana sakafo izay voarara matetika amin'ny sakafo hafa, toy ny proteinina sy ny tavy ary amin'ity tranga ity mandràra ny be lany indrindra, legioma sy legioma.
1 Sakafo avela sy voarara
1.0.1 Sakafo avela
1.1 Fanakianana sakafo
Sakafo avela sy voarara
Ny fihinana Atkins dia manondro mazava tsara ireo vondrona sakafo maromaro azontsika laniana, asongadinay fa ny sakafo dia misy ny fanjifana proteinina sy tavy 90%.
hena mena, saosisy
menaka, margarine, menaka, mayonnaise
menaka fanosotra, yaourt manontolo, fromazy sns.
Voarara ny sakafo voarara
Ny karbohidraty dia hanampy tsikelikely amin'ny sakafo rehefa mandeha mandresy ny dingana ny sakafo Tamin'ny voalohany dia azo avy amin'ny legioma izy ireo, mameno ny sakafo 10% sisa tavela.
Mofo sy lafarinina
paty sy vary
legioma misy fibra avo lenta
Mihena hatramin'ny farany ny fanjifana fibre satria manakana ny fitrohana tavy ao anaty tsinay. ny legioma maitso dia voafetra ho 50 grama isaky ny sakafo.
Ity sakafo ity dia voatsikera mafy noho ny fihinanana proteinina sy tavy be dia be izay naseho fa manimba tena amin'ny fahasalamana. Manao ahoana ireo izay misy fiatraikany amin'ny tsara mivezivezy ny arteria mampiakatra ny loza ateraky ny fijaliana amin'ny fo.
La tsy misy voankazo ary saika tsy misy legioma izy ireo dia miteraka tsy fisian'ny mineraly sy otrikaina ilaina maro. Ary farany, ny tsy fisian'ny fibre dia miteraka olana amin'ny fitohanana ka ny fanadiovana ny vatana dia tsy mitranga araka ny tokony ho izy.
Raha lazaina amin'ny ankapobeny, ny sakafon'ny Atkins dia tsy iray amin'ireo fahasalamana indrindra hitantsika eny an-tsena natao ho an'ireo olona tia mihinana nofo ary vitsy kokoa ny vehivavy tantsaha, raha lazaina, satria raha ny fahitana azy, ny fihinanana voankazo sy legioma dia saika tsy misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Torohevitra hampihenana lanja » Ny atetika momba ny sakafo atkins
Ny sakafo misaraka